Linkardipa - Page 316 of 444 - Entertainment Website
မြကင်းတောင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ကျည်လွဲ ဂါထာ
March 14, 2021 Linkardipa Comments Off on မြကင်းတောင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ကျည်လွဲ ဂါထာ
မြကင်းတောင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ကျည်လွဲ ဂါထာ သက်တော်၉၄ နှစ်ရှိ သက်တော်ရှည် မြကင်းတောင် ဆရာတော် ဘုရားကြီးကို တပည့် ကပ္ပိယ က “ကလေးတွေ သေနေပါပြီ ဘုရား” လို့ လျှောက်ထားလို့ မနေ့က ဆရာတော် ဘုရားကြီး ပေးလိုက်တဲ့ ကျည်ကွင်း ဂါထာပါ… “ဂစ္ဆ အမုမှိ” ကို “ဂစ်ဆအမုန်မှိ၊ တိတ်ထာဟိ” ဟု ဖတ်ပေးပါ… လူတိုင်းရွတိလဲရွတ်ပါ။ စာရွက်မှာရေးပီးအကျီအိတ်ထဲထည့်ထားပါ။ အိမ်တွေမှာလဲကပ်ထားကြပါ […]
One Stop Market ရဲ့မှန်တွေကိုရိုက်ခွဲသွားပေမဲ့ လူထုက ဆိုင်ထဲက ပစ္စည်းယူဖို့ နေနေသာ ဝိုင်းပြီးတောင်စောင့်ရှောက်ထား
March 14, 2021 Linkardipa Comments Off on One Stop Market ရဲ့မှန်တွေကိုရိုက်ခွဲသွားပေမဲ့ လူထုက ဆိုင်ထဲက ပစ္စည်းယူဖို့ နေနေသာ ဝိုင်းပြီးတောင်စောင့်ရှောက်ထား
One Stop Market ရဲ့မှန်တွေကိုရိုက်ခွဲသွားပေမဲ့ လူထုက ဆိုင်ထဲက ပစ္စည်းယူဖို့ နေနေသာ ဝိုင်းပြီးတောင်စောင့်ရှောက်ထား ညက One Stop Market ရဲ့မှန်တွေကိုရိုက်ခွဲသွားပေမဲ့ လူထုက စည်းကမ်းရှိတော့ဆိုင်ထဲက ပစ္စည်းယူဖို့ နေနေသာ ဝိုင်းပြီးတောင်စောင့်ရှောက်ထားကြပါတယ်။ ဒီလို ဖျက်ဆီးတဲ့အပြုအမူတွေကို ရပ်ကွက်နေလူထုက ပြုလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိသာအောင် ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ ဖက်ဆစ်ကောင်တွေရဲ့ မသမာတဲ့လုပ်ရပ်ဆိုတာ မှန်းကြည့်ရုံနဲ့ လူတိုင်းသိတယ်။ One Stop Market နဲ့ […]
ဇွန်းတစ်ချောင်းထဲနဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းစစ်မယ်
March 14, 2021 Linkardipa Comments Off on ဇွန်းတစ်ချောင်းထဲနဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းစစ်မယ်
ဇွန်းတစ်ချောင်းထဲနဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းစစ်မယ် ဇွန်းတစ်ချောင်းထဲနဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းစစ်မယ် အိမ်မှာရှိတဲ့စတီးဇွန်းတစ်ချောင်းထဲနဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးနည်း ပိုက်ဆံလည်း မကုန် အချိန်လေး ၁မိနစ်လောက် ပေးယုံနှင့် အဖြေရတဲ့ နည်းမို့ လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ် သာမာန်ဇွန်းတစ်ချောင်းကို ယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း လျှာတစ်ချောင်းလုံးကို ပွတ်လိုက်ပါ။ ဇွန်းတစ်ချောင်းလုံး သွားရည်တွေ စိုစွတ်နေ ပါစေ။ အဲ့ဒီနောက် အိတ်အကြည်တစ်လုံးကိုယူပြီးတော့ စတီးဇွန်းကို အိတ်ထဲထည့်လို့ ၎င်းအိတ်ကို အလင်းရောင် […]
March 14, 2021 Linkardipa Comments Off on ပိန်ချင်နေသူများအတွက် ဆန်ဆေးရည်
ပိန်ချင်နေသူများအတွက် ဆန်ဆေးရည် ပိန်ချင်နေသူများအတွက် ဆန်ဆေးရည် ပိန်ချင်သူတို့တွက် ဆန်ဆေးရည် ကိုရီးယား / ဂျပန် / ပိန်ဆေး တေ်ာတော် များများမှာ ဆန် ဖွဲနု ဂျင်ဆင်း ရှားစောင်း တို့ ပါ ၀င်ပါတယ်။ပိန်ချင် သူတ်ုိ့ တွက် ဆန်ဆေးရည် အသုံး ပြု ပြီး ၀ိတ်ချနည်းလေးကို ဝေမျှလိုက် ပေးလိုက် ပါတယ် နော်ချစ်တို့။ ဆန် ကို၁၅ မိနစ်စိမ်ပါ…အဲရေကိုသွန်ပစ်ပါ။ရေသန့် သို့ […]
March 14, 2021 Linkardipa Comments Off on ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ အပြင်ဖက်ကို ဆေးမသုတ်ဘဲ ထားရတဲ့ အကြောင်းရင်း
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ အပြင်ဖက်ကို ဆေးမသုတ်ဘဲ ထားရတဲ့ အကြောင်းရင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ အပြင်ဖက်ကို ဆေးမသုတ်ဘဲ ထားရတဲ့ အကြောင်းရင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ (Convocation Hall ) အပြင်ဖက်ကို ‌ ‌ဘာ့ကြောင့် ဆေးမသုတ် ကြတာလဲ? ၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် ပထမတခါဆေးသုတ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်7July တွင် ကျောင်းသားအရေးအခင်းဖြစ် ပြီး၊ သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ Rangoon […]
March 14, 2021 Linkardipa Comments Off on ကေအမ်မ်ယူ နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေ သည့် CDM ဝင်လိုက် သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ ၏ ပြောပြချက်များ (ရုပ်သံ)
ကေအမ်မ်ယူ နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေ သည့် CDM ဝင်လိုက် သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ ၏ ပြောပြချက်များ (ရုပ်သံ) ကေအမ်မ်ယူ နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေ သည့် CDM ဝင်လိုက် သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ ၏ ပြောပြချက်များ (ရုပ်သံ) ကေအမ်မ်ယူ နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေသည့် CDM ဝင်လိုက်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ ၏ ပြောပြချက်များ (ရုပ်သံ) ကေအမ်မ်ယူ နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေသည့် […]
ကိုယ်ဝန်နဲ့ အမ က ပုန်းနေတဲ့ ကလေးတွေကို ထုတ်မပေးလို့ . . .
March 14, 2021 Linkardipa Comments Off on ကိုယ်ဝန်နဲ့ အမ က ပုန်းနေတဲ့ ကလေးတွေကို ထုတ်မပေးလို့ . . .
ကိုယ်ဝန်နဲ့ အမ က ပုန်းနေတဲ့ ကလေးတွေကို ထုတ်မပေးလို့ . . . စိန်ပန်းဘက် ဆန္ဒပြကလေးအယောက်၂၀ကျော်ကို ဗိုက်ကြီးသည်အမျိုးသမီးက ဖွက်ထားပေးတာပါ။ဒလန်မက အိမ်လိုက်ပြလို့ ခွေးတွေရောက်လာပြီး စစ်တော့ ဗိုက်ကြီးသည်အမက ထုတ်မပေးလို့ ခေါင်းကို တေ့ပြီးပစ်လိုက်တာ အမဆုံးသွားပါဘီ 😭 ဆန္ဒပြလူအုပ်ထဲပစ်လို့ ထိတာမဟုတ်ဘူး။ သူများသားသမီးတွေကိုတောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ မိခင်စိတ်အပြည့်နဲ့ မိခင်လောင်းတစ်ယောက်ကျဆုံးခဲ့ရပါပြီ။ ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားလေးလည်း လူ့လောကထဲ ရောက်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမိစ္ဆာတွေနဲ့ […]
လျင်မြန်ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်ဖို့ ဒီနည်းအတိုင်း (၂)မိနစ်ခန့် ခြေဖဝါးကို နှိပ်ပေးပါ
March 13, 2021 Linkardipa Comments Off on လျင်မြန်ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်ဖို့ ဒီနည်းအတိုင်း (၂)မိနစ်ခန့် ခြေဖဝါးကို နှိပ်ပေးပါ
လျင်မြန်ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်ဖို့ ဒီနည်းအတိုင်း (၂)မိနစ်ခန့် ခြေဖဝါးကို နှိပ်ပေးပါ လျင်မြန်ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်ဖို့ ဒီနည်းအတိုင်း (၂)မိနစ်ခန့် ခြေဖဝါးကို နှိပ်ပေးပါ ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်တဲ့ လူတွေဖို့ မှန်ကန်တဲ့ နည်း လမ်း နဲ့ ခြေဖဝါး သို့ နှိပ် နယ် ပေး ခြင်း ဟာ နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် အိပ် စက် နိုင်ဖို့ အတွက် ကူညီပေး ကြောင်း လေ့လာချက် […]
ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၏ သမီးဖြစ်သူ မနိုင်နိုင်အေးကို ယူနက်စကိုက အလုပ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်း
March 13, 2021 Linkardipa Comments Off on ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၏ သမီးဖြစ်သူ မနိုင်နိုင်အေးကို ယူနက်စကိုက အလုပ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်း
ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၏ သမီးဖြစ်သူ မနိုင်နိုင်အေးကို ယူနက်စကိုက အလုပ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်း စစ်ကောင်စီပြန်ဝန် သမီးကို ယူနက်စကိုက အလုပ် ယာယီရပ်ဆိုင်း စစ်ကောင်စီက ပြန်ကြားရေးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည့် ဦးချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၏ သမီးဖြစ်သူ မနိုင်နိုင်အေးကို အလုပ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းစေခဲ့ကြောင်း ယူနစ်စကို(မြန်မာ)နှင့်နီးစပ်သူများက ပြောသည်။ မနိုင်နိုင်အေးသည် ယူနစ်စကို၏ Media and Information Literacy ဌာနတွင် National Program Officer (အမျိုးသားစီမံကိန်းအရာရှိ) အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီး Social […]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ခေတ္တဒုတိယသမ္မတမန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာပြည်သူများအတွက် မိန့်ခွန်းပြောပါပြီ
March 13, 2021 Linkardipa Comments Off on ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ခေတ္တဒုတိယသမ္မတမန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာပြည်သူများအတွက် မိန့်ခွန်းပြောပါပြီ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ခေတ္တဒုတိယသမ္မတမန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာပြည်သူများအတွက် မိန့်ခွန်းပြောပါပြီ(ရုပ်သံ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ခေတ္တဒုတိယသမ္မတမန်းဝင်းခိုင်သန်း၏ နိုင်ငံတော်အခြေပြ မိန့်ခွန်း (၁၃-၃-၂၀၂၁) မန်းဝင်းခိုင်သန်းကို ခေတ္တ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) က ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မန်းဝင်းခိုင်သန်းဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းချိန်အထိ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရှိခဲ့သူပါ။ “ပြည်သူ့အစိုးရကို စစ်အုပ်စုက အဓမ္မနည်းနဲ့ ဖယ်ရှားပြီး အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့အတွက်” နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုဖို့၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့ […]
« 1 … 315 316 317 … 444 »